Conveyor drive တွင်ပါဝင်သည်တွင် ၁။ ဂီယာဘောက် ၂။ အမြန်နှုန်းနိမ့်နိမ့်နိမ့်အနိမ့်အချင်းဆက်မှီများ ၃။ သမားရိုးကျသို့မဟုတ်အရည်အမျိုးအစားထည့်သွင်းအကန့်များ ၄။ ဆိုင်းထိန်း / နောက်ဘက် ၅။ ဒစ်ဘရမ်ဘရိတ်ဘရိတ် ၆။ ပန်ကာ ၇။ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစောင့်များ ၈ ပျံသည့်ဘီး (inertia ဘီး) အားအမှီအခိုကင်းသော။ Support motor များ ၉။ လျှပ်စစ်မော်တာများ (HV သို့မဟုတ် LV) ၁၀။ ကြမ်းခင်းတွင်ကြမ်းခင်းဘောင်များ၊ swing base or tunnel arm version များဖြင့်လည်ပတ်သည့်ဗားရှင်း ၁၁။ Output coupling guard Conveyor belt drive များ - ထူးခြားချက်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ· 2000KW အထိစွမ်းအင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ...
Conveyor drive ကိုစုဝေးပါဝင်သည်:
2. နိမ့်မြန်နှုန်း output ကိုနားချင်းဆက်မှီ
3. သမားရိုးကျသို့မဟုတ်အရည်အမျိုးအစား input ကိုနားချင်းဆက်မှီ
4. ဆိုင်းငံ့ထား / backstop
5. Disc သို့မဟုတ်စည်ဘရိတ်
၉။ လျှပ်စစ်မော်တာများ (HV သို့မဟုတ် LV)
၁၀။ ကြမ်းခင်းတွင်တပ်ဆင်ထားသောအခြေခံဘောင်များ၊ လည်ပတ်အခြေအမြစ်၊
11. Output နားချင်းဆက်မှီကိုယ်ရံတော်
Conveyor Belt Drives - ထူးခြားချက်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
· 2000KW အထိစွမ်းအင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များအတွက်စိတ်ကြိုက်သိုလှောင်ထားသည့်သယ်ဆောင်နိုင်သောတပ်ဆင်ခြင်းရွေးချယ်မှုများနှင့်အတူ
·ကြာရှည်ခံနိုင်သည့်သက်တမ်း - ပုံမှန်အားဖြင့်နာရီ ၆၀,၀၀၀ ကျော်
·အနိမ့်မြန်နှုန်း output ကိုနားချင်းဆက်မှီ
·သမားရိုးကျသို့မဟုတ်အရည်အမျိုးအစား input ကိုချိတ်ဆက်မှု
·ဆိုင်းငံ့ထားခြင်း / backstop
· Disc သို့မဟုတ်ဘရိတ်ဘရိတ်
·အမှီအခိုကင်းသောထောင့်များပါသောဘီး (inertia ဘီး)
·လျှပ်စစ်မော်တာများ (HV သို့မဟုတ် LV)
·ကြမ်းခင်းတွင်တပ်ဆင်ထားသောအခြေခံဘောင်၊ လည်ပတ်အခြေအမြစ်သို့မဟုတ် torque mount ဗားရှင်းများတွင် torque arm နှင့်အတူ
· Output နားချင်းဆက်မှီကိုယ်ရံတော်
သီအိုရီ၏သက်တမ်းသည်ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းရေးထားသောဂီယာအုံပုံစံနှင့်လုံလောက်သောချောဆီကိုသာလက်တွေ့တွင်အောင်မြင်နိုင်သည်။ ကွင်းဆက်အတွေ့အကြုံများဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသောဤစီးရီးတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောရှေ့ပြေးပုံစံစမ်းသပ်ခြင်းသည်အသုံးပြုသူသည်လိုချင်သောသက်တမ်းကိုရရှိနိုင်မည်ကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ ဤအချက်ကကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားအစီအစဉ်မရှိသောပြတ်တောက်မှုများကိုရှောင်ရှားစေပြီးနောက်ဆုံးတွင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။
ကျယ်ပြန့်သောရှေ့ပြေးပုံစံစမ်းသပ်ခြင်းသည်ရိုးရှင်းသောအတွင်းပိုင်းချောဆီကိုဒီဇိုင်းသည်လည်ပတ်မှုအပူချိန်များ၊ ဂီယာအုံ၏တိမ်းညွတ်မှုနှင့်အရှိန်မြန်နှုန်းအမျိုးမျိုးတွင်လည်ပတ်ကြောင်းသေချာစေခဲ့သည်။ conveyor များအတွက် variable speed drives များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသူများသည် creep speeds များ၌လည်ပတ်နေသည့်တိုင်၎င်းတို့၏ drives မ်ားကိုလုံလောက်စွာချောဆီများဖြစ်နေသည်ကိုယုံကြည်ရန်လိုအပ်သည်။ အအေးရေနံအခြေအနေများမှစတင်လုပ်ဆောင်မှုများကိုအပူချိန်နိမ့်ကျသည့်အချိန်တွင်ပင်စတင်ဖွင့်လှစ်ထားစဉ်တွင်ပင်ဝက်ဝံနှင့်ဂီယာများအားလုံးကိုလုံလုံလောက်လောက်ချောဆီဖြစ်စေသည်။
စက်မှုစက်ယန္တရားများ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဒီဇိုင်းတွင်ဆူညံသံညစ်ညမ်းမှုသည်အမြဲတမ်းတိုးပွားလာသောကြောင့်ဂီယာအုံများသည်ဆူညံမှုနည်းပါးစေရန်ရည်ရွယ်သည်။ စီးရီးတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများပါ ၀ င်ပြီးဆူညံသံနည်းသောလည်ပတ်မှုအတွက်အသင့်အတင့်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက်သီအိုရီဆိုင်ရာရလဒ်များကိုစေ့စေ့စပ်စပ်စမ်းသပ်သည့်တူးစင်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ဆူညံသံတိုင်းတာမှုများကိုစစ်ဆေးသည်။
ရှေ့သို့ တစ်ခုလုံးကိုသွန်းထားသောတစ်ခုတည်းသောအခင်းတစ်ခုသည် roller table ဂီယာအုံလိုက်မော်တာတပ်ဆင်ထားသည်
နောက်တစ်ခု: ဝါယာကြိုးလှံတံထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများအတွက် Professional ကတရုတ်တရုတ်မျိုးစုံအမျိုးအစားပျံညှပ်